Sanduuqa Taageerada Ganacsiga
Deeq-lacageed lagu taageerayo ganacsiyada iyada oo loo marayo xaddidaadaha dib loo cusbooneysiiyay
Sanduuqa Taageerada Ganacsiga - Balaadhinta (Business Support Fund – Expansion) ayaa loo bilaabay in lagu taageero meheradaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Melbourne iyo Mitchell Shire oo laga yaabo inay dhaqaale ahaan saameyn ku yeelatay soo noqoshada Marxaladda 3 Joogitaanka xayiraadaha Guryaha (stage 3 Stay at Home)ee xaafadahan.
Barnaamijka waxaa loo dheereeyay inuu taageerayo ganacsatada ay saameyn ku yeelatay xayiraadaha marxaladaha dib-u-soo-nooleynta ee heer gobol oo dhan Victoria oo lagu dhawaaqay 3 Ogosto 2020.
Barnaamijka waxaa kale oo ku jira $ 5,000 oo dheeraad ah oo loogu talagay ganacsatada xaq u leh ee ku nool Melbourne iyo Mitchell Shire, iyagoo qiraya muddada sii socota Marxaladda 3 iyo xaddidaadaha cusub ee Marxaladda 4.
Deeqaha soo socda hal-mar ayaa loo heli doonaa ganacsiyada u qalma:
$ 5,000 oo loogu talagalay ka shaqagelinta meheradaha degmooyinka dawladaha hoose (LGAs) marka laga reebo Mitchell Shire
$ 10,000 oo loogu talagalay ka shaqagalinta meheradaha magaalada Melbourne iyo Mitchell Shire.
Ganacsiyada u qalma Melbourne ama Mitchell Shire ee horay u helay deeqda $ 5,000 ee bilowga ah ee barnaamijka Balaarinta Maalgelinta Taageerada Ganacsiga(Business Support Fund Expansion program), ama mid dalbaday, uma baahna inay dib u codsadaan. Codsadayaasha guuleysta waxay si otomaatig ah u heli doonaan $ 5,000 oo dheeri ah.
Codsiyada barnaamijka wuxuu xirmi doonaa 11.59 pm Isniinta, 14ka Sebteember 2020 .
Barnaamijkan waxaa sii dheer wareegii koowaad ee Sanduuqa Taageerada Ganacsiga, (Business Support Fund) oo xirnaa 1 Juun 2020.
Ganacsi noocee ah ayaa dalban kara deeqdan?
Meheradda ayaa codsan kara haddii ay buuxiyaan dhammaan shuruudaha hoos ku taxan. Waa inay:
aad kaqeybgaleysid mashruuca Bixinta Lacagta ee Dawlada Dhexe (JobKeeper )
laga diiwaangaliyo WorkSafe 30ka Juun 2020 oo aan awoodno inaad bixiso Lambarka Loo shaqeeyaha WorkCover
haysato mushahar sanadle ah oo ka yar $ 3 milyan sanadka 2019-20
laga diiwaangeliyaa Cashuurta Badeecadaha iyo Adeegyada (Goods and Services Tax GST) laga bilaabo 30ka Juun 2020
heysataa Lambarka Ganacsiga ee Australian Business Number (ABN) oo haaystaas ABN 30 Juun 2020
laga diiwaangeliyaa nidaamyada federaalka ee la xiriira ama Gobolka.
Waa maxay caddaymaha ganacsigu u baahan yahay inuu ku siiyo dalabkooda?
Codsadayaashu waa inay bixiyaan caddaynta:
Cinwaanka meheradooda iyaga oo adeegsanaya biilkooda ugu dambeeyay (gaaska, korantada, isgaarsiinta, biyaha); heshiiska kirada; ama ogeysiiska sicirka golaha.
Kaqeybgalkooda qorshaha Nidaamka Bixinta Lacagta ee Dawlada Dhexe (Jobkeeper). Caddaynta loo baahan yahay waxay noqon doontaa Baaqa Baahiyaha Ganacsiga ee Bilkasta Soo Baxa Xaqiijinta nambarka aqoonsiga ama lambarka aqoonsiga diiwaangelinta ee laga keenay Xariirka Meheradda Cashuurta Australiya (Australian Taxation Office Business Portal).
Lambarka Loo-shaqeeyaha WorkCover (WEN). Kani waa lambar gaar ah oo loo qoondeeyay in lagu aqoonsado loo shaqeeyaha ka diiwaangashan ujeeddooyinka WorkCover. Dhamaan loo shaqeeyayaasha waa inay ka helaan qaansheegkooda 2020-21 WorkSafe wigiiba laga bilaabo Isniinta 6da Luulyo 2020, taas oo ka koobnaan doonta WEN.
Mushaharka kayar $ 3 milyan marka loo eego 2019-20. Xafiiska Dakhliga Gobolka (State Revenue Office (SRO) ayaa xaqiijin doona haddii meheraddu ay lahaan lahayd wax ka yar $ 3 milyan marka loo eego 2019-20. Codsadayaasha looma baahna inay ku lifaaqaan dukumiinti. Ganacsiyada qaarkood, waxay u baahan yihiin inay dhammaystirto xisaab xidhka canshuurta mushaharka ee sannadlaha ah (haddii aadan horey u jirin) taasoo ay ugu dambaysay 21ka Luulyo 2020 si aad u awood ugu siiso SRO inay qiimeeyaan inaad lahayd mushahar ka yar $ 3 milyan.
Isdiiwaangelinta sharciyeynta ay khuseyso sida sharcigu dhigayo. Xeerarka la xiriira
Guddiga Amniga iyo Maalgashiga ee Australia (Australian Securities and Investment Commission (ASIC); (ASIC);
Hay'adaha samafalka ee Australiya iyo non-macaashka (ACNC) ee samafalka iyo faa'iido-doonka;
Consumer Affairs Victoria (CAV) oo loogu talagalay naadiyada ama kooxaha bulshada ee ku jira ururrada iskuxiran.
Sidee loo isticmaali karaa deegdan?
Deeqda waxaa loo isticmaali karaa kharashyada ganacsiga sida:
yutiilitida (gaaska, korantada, isgaarsiinta, biyaha), mushaaraadka ama kirada
raadinta dhaqaale, sharci ama tallooyin kale oo lagu taageerayo qorshaynta sii wadista ganacsiga (in la qorsheeyo loona diyaariyo sida loo shaqeeyo inta lagu jiro iyo kadib cudurka faafa ee coronavirus)
kobcinta ganacsiga adoo adeegsanaya suuq geyn iyo hawlo isgaarsiin
taageerida howlaha la xiriira howlaha ganacsiga.
Macluumaadka muhiimka ah oo arjiga
Ganacsiyada ka helay maalgelin kale Xidhmada Badbaadinta Dhaqaale ee Dowlada Fiktooriya (Economic Survival Package ) ayaa u qalma inay codsadaan barnaamijkan.
Mulkiileyaasha ganacsiyada ee aan shaqaaleysiin dadka uma qalmaan maal-gelinta barnaamijkaan. Ganacsade kaligiis ah ama shaqsi iskaashi ah oo aan cid kale u shaqaalayn sida shaqaalaha looma tixgelinayo inay yihiin 'shirkad shaqaaleysiin' mana u qalmo deeqda.
Meherad shaqaaleysiintu waa mid qofka bixisa ama waajib ku ah inuu siiyo mushaharka shaqaalaha. Shaqaalaynta ganacsiyada guud ahaan waxaa looga baahan yahay:
Bixinta Canshuur Bixinta Sidaad Socoto (Pay As You Go PAYG) adoo ku hadlaya magaca shaqaalaha
iska diiwaangeliso caymiska WorkCover halkaasoo ay ka shaqeeyaan tababarayaasha ama ay bixiyaan mushaharka sanadlaha ah ee ka badan $ 7,500. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waajibaadkaaga WorkCover booqo websaydhka WorkSafe . Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa WorkSafe adiga oo ku caawinaya turjumaan wacaya TIS National taleefanka 13 14 50.
Hay'adaha aan macaash-doonka ahayn iyo hay'adaha samafalka ee leh dakhli sannadeedka u dhexeeya $ 75,000 iyo $ 150,000 ee aan ka diiwaangashanayn Badeecadaha iyo Adeegga (Goods and Service Tax , GST) oo ka diiwaangashan Hay'adaha Samafalka ee Australiya iyo Komishanka-faa'iido-doonnimada (Australian Charities and Not-for-Profit Commission, CNC) ayaa u qalma inay codsadaan.
Meherad, sida lagu qeexay Numberkeeda Ganacsi ee Australiya (Australian Business Number ABN), waxay heli kartaa hal deeq oo keliya Sanduuqahan.
Iyadoo qayb ka ah habka qiimeynta, macluumaadka ay bixiyeen codsadayaashu waxaa laga yaabaa inay hoos galaan jeeg ay la galaan hay'adaha kale ee dowladda oo ay ku jiraan Xafiiska Dakhliga Gobolka (State Revenue Office, WorkSafe ), WorkSafe iyo Guddiga Amniga iyo Maalgashiga ee Australiya (Australian Securities and Investment Commission).
Go'aanka bixinta deeqdu waxay ka mid noqon doontaa tixgelinta:
wixii natiijo kasto oo kasto oo uu helo maamule ku saabsan ganacsiga
haddii meherad la geliyo maamul ka baxsan
haddii ay jirto codsi ah in la joojiyo ama la diro shirkad ama ganacsi
haddii ganacsigu yahay, ama noqday, la xidhayo ama aan la diiwangelin (oo ay kujirto baajinta ama dib u dhaca diiwaangelinta).
Codsadayaashu waa inay hubiyaan macluumaadkooda ABN iyo diiwaangelinta ay la yeeshaan Guddiga Amniga iyo Maalgashiga ee Australiya (Australian Securities and Investment Commission) inay cusboonaynayaan waqtiga codsiga.
Waaxda Shaqooyinka, Degmooyinka iyo Gobollada (Department of Jobs, Precincts and Regions ) ayaa ujeeddadeedu tahay inay ku wargaliyaan dhammaan codsadayaasha natiijada codsigooda toban maalmood gudahood gudahood.
Faahfaahinta ganacsiga ee ay codsadeyaashu bixiyaan waxaa lagu hubin doonaa Guddiga Amniga iyo Maalgashiga ee Australiya (Australian Securities and Investment Commission, ASIC), Hay'adaha samafalka ee Australiya iyo Wakiilka aan faa'iido-doonka ahayn (Australian Charities and Not-for-profits Commissioner, ACNC), Macaamiisha Arimaha Fiktooriya (Consumer Affairs Victoria CAV) iyo / ama sharciyeyaal kale oo ku habboon.
Dawlada Fiktooriya waxay codsan kartaa caddeyn (sida warbixinnada mushahar bixinta si loo muujiyo saameyn) muddo afar sano ah ka dib markii deeqda la oggolaaday.
Haddii macluumaad kasta oo ku jira arjiga la arko inuu yahay mid been ah ama marin habaabin ah, ama deeqo aan loo istcimaarin ujeeddooyinka lagu qeexay tilmaamahan iyo arjiga ku lifaaqan, ganacsiga waxaa la weydiisan karaa inuu ku celiyo deeqda Dowladda Fiktooriya.
Waad dalban kartaa halkan
Dhammaan su'aalaha ku jira arjiga waa in la buuxiyaa iyo dukumiinti kasta oo la codsado oo ku lifaaqan si loo hubiyo qiimeyn deg deg ah iyo bixinta deeqda.
Hadaad ubaahantahay caawinaad dheeri ah, fadlan nala soo xiriir ama wac khadka tooska ee Victoria taleefanka 13 22 15 . Haddii aad ubaahantahay turjubaan, wac TIS National taleefanka 131 450 weydiina khadka tooska ee Business Victoria.